Justin Bieber နဲ့ ဘယျတော့မှ မတှခေ့ငျြတော့ဘူးဟုဆိုလာသူ Pop အဆိုတျောမလေး Billie Eilish – SoShwe
Home/Entertainment/Justin Bieber နဲ့ ဘယျတော့မှ မတှခေ့ငျြတော့ဘူးဟုဆိုလာသူ Pop အဆိုတျောမလေး Billie Eilish
Justin Bieber နဲ့ ဘယျတော့မှ မတှခေ့ငျြတော့ဘူးဟုဆိုလာသူ Pop အဆိုတျောမလေး Billie Eilish
အသကျ ၂၀ နှဈအရှယျရှိ ပေါ့အဆိုတျောမလေး Billie ဟာ ဂုဏျသတငျးကြျောကွားမှုကို မုနျးတီးတဲ့အကွောငျးနဲ့ Justin Bieber နဲ့ မတှခေ့ငျြရတဲ့အကွောငျးကို ထုတျဖျောပွောဆိုလာပါတယျ။ Los Angeles သူလေး Billie ကို ကမ်ဘာ့အလုပျအရှုပျဆုံး ကောငျမလေးလို့ တငျစားချေါဝျေါကွသလို သူမဟာ ခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ သီခငျြးတှကေို သီကုံးရေးသားပွီး ထူးခွားစှဲမကျဖှယျကောငျးတဲ့ အသံပိုငျရှငျတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Ocean Eyes ဆိုတဲ့သီခငျြးနဲ့ ဂီတလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျလာပွီး Instagram မှာလညျး Follower ၉၉သနျးကြျောရှိတဲ့ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျပဲ ဖွဈပါတယျ။
“ ကြှနျမအနနေဲ့ အနုပညာရှငျအမွောကျအမွားရဲ့ ပရိသတျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး သူတို့နဲ့ တှဆေုံ့နိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးမြိုး လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး . . . ” လို့ Billie မှ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ နောကျပွီး သူမအနနေဲ့လညျး Justin Bieber ကို ခဈြမွတျနိုးခဲ့တဲ့အကွောငျးကို “ ကြှနျမအရငျတုနျးက JB ကို ခဈြကွိုကျခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပရိသတျတဈယောကျလိုတော့ မဟုတျပါဘူး . . .” လို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ သူမအနနေဲ့ ကမ်ဘာကြျော ပေါ့အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ JB ကို အသကျ ၁၂ အရှယျ ကလေးဘဝက တဈဖကျသကျ ခဈြကွိုကျခဲ့ဖူးတယျဆိုတာကို ဝနျခံခဲ့ပွီး JB အနနေဲ့ သူမ မညျသူမညျဝါဖွဈတယျဆိုတာပငျ သိရှိမှာမဟုတျတဲ့အကွောငျးနဲ့ အခုခြိနျမှာတော့ JB ကို ဘယျတော့မှ မတှခေ့ငျြတော့ဘူးလို့ ဆိုလာပါတယျ။
ဆကျလကျပွီးသူမကပဲ “ ဂုဏျသတငျး ကြျောကွားမှုဆိုတာ အလှနျပဲ ကွောကျဖို့ကောငျးပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီ ဂုဏျသတငျးကွောငျ့ ကြှနျမဟာ Show ပှဲတှေ သီဆိုလို့ရခဲ့ပွီး လူအမြားကွီးနဲ့ တှဆေုံ့ခှငျ့ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အဲ့ဒီဂုဏျသတငျးကပဲ ကြျောကွားမှုတှကေို ပွောငျးလဲပဈနိုငျပွီး ကွောကျစရာကိစ်စရပျတှအေဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျလို့ပါပဲ . . . ” ဆိုပွီး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Justin Bieber နဲ့ ဘယ်တော့မှ မတွေ့ချင်တော့ဘူးဟုဆိုလာသူ Pop အဆိုတော်မလေး Billie Eilish
အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ်ရှိ ပေါ့အဆိုတော်မလေး Billie ဟာ ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားမှုကို မုန်းတီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ Justin Bieber နဲ့ မတွေ့ချင်ရတဲ့အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပါတယ်။ Los Angeles သူလေး Billie ကို ကမ္ဘာ့အလုပ်အရှုပ်ဆုံး ကောင်မလေးလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသလို သူမဟာ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီချင်းတွေကို သီကုံးရေးသားပြီး ထူးခြားစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အသံပိုင်ရှင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Ocean Eyes ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ ဂီတလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာပြီး Instagram မှာလည်း Follower ၉၉သန်းကျော်ရှိတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ ကျွန်မအနေနဲ့ အနုပညာရှင်အမြောက်အမြားရဲ့ ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့နဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုး လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး . . . ” လို့ Billie မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူမအနေနဲ့လည်း Justin Bieber ကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “ ကျွန်မအရင်တုန်းက JB ကို ချစ်ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်တစ်ယောက်လိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး . . .” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ ကမ္ဘာကျော် ပေါ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ JB ကို အသက် ၁၂ အရွယ် ကလေးဘဝက တစ်ဖက်သက် ချစ်ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကို ဝန်ခံခဲ့ပြီး JB အနေနဲ့ သူမ မည်သူမည်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာပင် သိရှိမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ အခုချိန်မှာတော့ JB ကို ဘယ်တော့မှ မတွေ့ချင်တော့ဘူးလို့ ဆိုလာပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးသူမကပဲ “ ဂုဏ်သတင်း ကျော်ကြားမှုဆိုတာ အလွန်ပဲ ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီ ဂုဏ်သတင်းကြောင့် ကျွန်မဟာ Show ပွဲတွေ သီဆိုလို့ရခဲ့ပြီး လူအများကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီဂုဏ်သတင်းကပဲ ကျော်ကြားမှုတွေကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပြီး ကြောက်စရာကိစ္စရပ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်လို့ပါပဲ . . . ” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Previous ဒျေါလာ ၁ မီလီယမျကြျောရရှိခဲ့တဲ့ ကငျညာနိုငျငံမှ ကြောငျးဆရာအကွောငျး။
Next အငျတာဗြူးပွုလုပျနစေဉျအတှငျး သတငျးထောကျမလေးကို ဖကျနမျးလိုကျတဲ့ မနျစီးတီးကွယျပှငျ့။